Kalfadhiga 5aad ee Baarlamaanka Hirshabeelle oo maanta ka furmay Jowhar – Kalfadhi
Maxamed Cabdi Waare, Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa maanta si rasmi ah u furay Kalfadhiga 5aad ee Baarlamaanka Hirshabeelle oo fasax ku maqnaa muddo ka badan laba bilood. Madaxweynaha ayaa khubad furitaankiisa Kalfadhiga waxa uu diiradda ku saaray xaaladaha ka jira Hirshabeelle waxa uuna Baarlamaanka kula dar-daarmay iney si deg deg ah uga shiraan dhibaatada Hirshabeelle.
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen ayaa sidoo kale hadal ka jeediyay xarunta Baarlamaanka, waxa uuna aad uga hadlay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Hirshabeelle isagoo Baarlamaanka ku booriyay iney muujiyaan la xisaabtan iyo iney muujiyaan dulqaad, maadaama Hirshabeelle ay ku jirto soo kabasho dhan walba ah.
“Farxad ayey ii tahay inaan maanta furo Kalfadhiga 5aad ee Baarlamaanka, wixii xiligaan ka dambeeyo Kalfadhiga Baarlamaanka Dowlad Goboleedka Hirshabeelle waa noo furan yahay, waxaana idinka sugnaa waxqabad muuqda”, ayuu yiri Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. “Dhawaan waxaan sameynay isbadal, kuwa kalana waa dhici doonaa, waa in Baarlamaanka ay dulqaataan, waayo waxaan rabnaa inaa wax saxno”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Madaxweyne Waare, oo ay dhinac fadhiyeen Ku xigeenkiisa iyo Wasiirka Arimaha Gudaha Hirshabeelle.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Hirshabeelle Sheekh Cusmaan Barre ayaa sheegay in Kalfadhiga 5aad ee Baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ay u taalo shaqo adag, waxa uuna balan qaaday inuu gudan doono waajibaadka saaran. Guddoomiyaha ayaa sheegay in waxyaabo badan oo ay kamid ah tahay colaadaha ay diiradda saari doonaan.
“Kalfadhigaan waxaa noo taala shaqo adag, waxaana sugeynaa inaa gudano waajibaadka na saaran, waxaa ka mid ah waxyaabaha aan ka fariisan doono dagaal beeleedka ku soo laa laabtay Hirshabeelle”, ayuu yiri Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Hirshabeelle, Sheekh Cusmaan Barre.
Maxamed Cabdi Waare, Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa maalmo ka hor waxa uu soo dhisay Xukuumad cusub oo u badan Xildhibaano katirsan Baarlamaanka maamulka Hirshabeelle. ugu yaraan 34 mudane oo wasiiro loo magacaabay ayaa sidoo kale katirsan Xildhibaanada maamulka Hirshabeelle. Arintaan ayaa dad badan waxay u arkaan ka hortaga mooshin la sheegay iney Xildhibaano katirsan maamulkaasi ay ka wadaan Madaxweyne Waare.
Xildhibaan katirsan Baarlamaanka Hirshabeelle oo Muqdisho ku dayacan